‘Udla izithelo zokuzikhandla kwakhe uShalulile,’ kusho u-Erasmus - Impempe
‘Udla izithelo zokuzikhandla kwakhe uShalulile,’ kusho u-Erasmus
Umgadli weMamelodi Sundonws, uKermit Erasmus usencome uzakwabo uPeter Shalulile wathi unconywa ngapha nanpgapha nje yingenxa yokuzikhandla kwakhe.
UShalulile wenze osekwehlule inqwaba yabagadli abafike kwiSundowns ngaphambi kwakhe njengoba eshaye amagoli angu-15 ngesizini yakhe yokuqala.
“Ngiyaye ngihlale naye uPeter uma sesiqede ukujima. Uyaqhubeka azicije yedwa,” kusho u-Erasmus kuleli viki. UShalulile ushode ngegoli elilodwa ukuba athole ngokubambisana indondo yomshayimagoli ophambili noBradley Grobler weSuperSport United.
“Ungumuntu ozithobile, usebenza ngokuzikhandla futhi akanamhawu. Kumfanele konke okuhle akuzuzile. Kwale kancane athole nendondo yokuhamba phambili ngamagoli.
“Ngicabanga ukuthi ukube washeshe walishaya igoli emdlalweni wethu wokugcina wayezoyifaka inselelo kuBradley Grobler. Akwenzekanga kodwa noma kunjalo bekuyisizini yakhe lena,” kuchaza u-Erasmus.
Lo mgadli yena ushaye amagoli amathathu kuphela ngesizini yakhe yokuqala kumaBrazilians kodwa uthi akumkhathazi lokho ngoba kunezizathu zakho. Uthi into eyenza uShalulile ahluke wukuthi uhlezi esesimweni esisodwa.
“Uyakubona ukuthi akadeli uma esenkundleni, uyalwa futhi uhlezi enomdlandla. Ufana nomfowethu kimi, futhi sisondelane kakhulu kule sizini. Ngiyamsiza la ngingasiza khona ngoba uyakwazi okumhlulayo futhi ufuna ukukufunda.”
Ezakamuva, iDStv PremiershipDStv Premiership, Kermit Erasmus, Mamelodi Sundowns, Peter Shalulile
Previous Previous post: Iyamthimulisa uMngqithi eyokuxoshwa kukaHunt kwiChiefs
Next Next post: Nakhu iChiefs edinga ukukwenza ngaphambi kokuqala kwesizini entsha